UMongameli waseTanzania ubeka iphulo lokuvuselela ukhenketho ngokubanzi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » UMongameli waseTanzania ubeka iphulo lokuvuselela ukhenketho ngokubanzi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Umongameli waseTanzania uSamia Suluhu Hassan usungule inkqubo yamaxwebhu ezokhenketho eza kuveza iTanzania phambi kweemarike zokhenketho zehlabathi, ejolise ekutsaleni uninzi lwabakhenkethi kunye notyalo mali kweli lizwe.
Inkqubo ebhaliweyo esandula ukwenziwa ye- "Royal Tour" iya kurekhodwa kwiindawo ezahlukeneyo eTanzania.
Kukhenketho, uMongameli uza kujoyina iindwendwe ngokwakhe aze athathe inxaxheba ekurekhodeni ukhenketho lokuhanjiswa nokusasazwa kwehlabathi.
Ukurekhodwa kwe-documentary eyenzelwe ukukhuthaza iTanzania kumazwe ngamazwe kwaqala ngo-Agasti 28, 2021, e-Zanzibar apho uMongameli ngoku ehambele ngokusemthethweni.
Uxwebhu lwezokhenketho luza kurekhodwa phantsi kukaSihlalo wekomiti kaMongameli oya kuthi alungelelanise isicwangciso sokunyusa iTanzania kwilizwe liphela kwaye onguNobhala osisigxina kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezolwazi, iNkcubeko, ubuGcisa neMidlalo.
"UMongameli uzakubonisa iindwendwe ezahlukeneyo zokhenketho, utyalo-mali, ezobugcisa, kunye neenkcubeko ezikhoyo eTanzania," ifundeka njengenxalenye yengxelo ekhutshwe yi-Ofisi kaMongameli waseTanzania. Inkqubo yeRoyal Tours yenzelwe ukomeleza ubudlelwane phakathi kweTanzania kunye nezinye izizwe, ukukhuthaza ukhenketho kunye nentsebenziswano yokuhamba phakathi Thanzaniya, ezinye izizwe, kunye nemibutho.
UMongameli Samia uthe urhulumente uqalise izicwangciso ezinobundlongondlongo zokuthengisa ilizwe ngokukhuthaza amathuba ezoqoqosho kwihlabathi liphela. Emva kokuthatha i-ofisi ephezulu eTanzania ngoMatshi walo nyaka, uMongameli Samia uthe urhulumente wakhe ulindele ukunyusa inani labakhenkethi ukusuka kwi-1.5 yezigidi ukuya kwi-5 yezigidi zabakhenkethi kule minyaka mihlanu izayo.
Kwakwimigca efanayo, urhulumente ulindele ukunyusa ingeniso yabakhenkethi ukusuka kwi-US $ 2.6 yezigidigidi ukuya kwi-US $ 6 yezigidigidi ngelo xesha, utshilo. Ukufezekisa iithagethi zakhe ezicetywayo, urhulumente ngoku utsala utyalo-mali kwiihotele nakwezokhenketho ngeendlela ezahlukeneyo zokundwendwela abakhenkethi, ubukhulu becala iindawo zembali kunye namanxweme olwandle, phakathi kwezinye iziza ezazingakhange ziphuhliswe ngokupheleleyo ukutsala abakhenkethi.
I-Tanzania iyakuthi ichonge amazwe aneqhinga lokuthengisa ukhenketho lwayo kusetyenziswa oonozakuzaku kunye noonozakuzaku ngokuthengisa okurhabaxa kweemveliso zayo kwilizwe liphela. Ukuphononongwa kweerhafu ezingavumelekanga kwezokhenketho, ezijolise ekukhululeni abatyali mali kwirhafu nakumthwalo wengeniso kuya kuqwalaselwa.
Inkomfa, ulwandle, kunye neemveliso zabakhenkethi belifa lemveli, kunye neenqanawa zokuhamba ngenqanawa zezona ndawo zinokubakho ezifuna uphuhliso kunye nentengiso yokutsalela abakhenkethi abaninzi notyalo-mali lokuhamba-ikakhulu iihotele, ezothutho lomoya, kunye neziseko zophuhliso.
Ukuphuhliswa kweepaki zesizwe eNtshona I-Tanzania kulindeleke ukuba inyuse ukhenketho Kummandla weLwandle oluKhulu, odume ngeetshimpanzi kunye neegorila ezihambahamba phakathi kweTanzania, iUganda, iRwanda kunye neDR Congo. Iipaki ezintsha zikwalindeleke ukuba zikhuthaze ukhenketho lwengingqi nolweAfrika phakathi kweTanzania, iUganda, iRwanda, iBurundi, neDemocratic of Congo (iDRC).
Ezokhenketho ziphakathi kwezona ndawo ziphambili kwezoqoqosho apho amazwe aseAfrika ejonge ukukhulisa, ukuthengisa, kunye nokukhuthaza ukuphumelela kwelizwekazi.
UMongameli Samia wenza uKhenketho lwaseburhulumenteni lweentsuku ezimbini eKenya ngoMeyi kulo nyaka, emva koko wabamba iingxoxo noMongameli waseKenya uMnu Uhuru Kenyatta, ejolise kuphuhliso lwezorhwebo kunye nokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe amabini angabamelwane. Ezi Ntloko zombini zamazwe ziye zavumelana ngokudibeneyo ukushenxisa imiqobo ethintela ukuhamba kakuhle kwezorhwebo nabantu phakathi kwamazwe ama-2 aseMpuma Afrika emva koko bakhuthaze abakhenkethi bengingqi nabamazwe aphesheya ukuba batyelele ilizwe ngalinye.
Kamva bayalela amagosa abo ukuba aqalise kwaye agqibe iintetho zorhwebo ukuvala umohluko omkhulu phakathi kwamazwe ama-2. Ukuhamba kwabantu kukwabandakanya abakhenkethi basekhaya, bengingqi nabangaphandle abatyelele iKenya, iTanzania, kunye nommandla wonke weMpuma Afrika.